Madaxwaynaha Jabuuti oo Wasiir U Soo Diray Muuse Biixi | Baligubadlemedia.com
Madaxwaynaha Jabuuti oo Wasiir U Soo Diray Muuse Biixi
Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Muumin Axmed Sheekh iyo wefti uu hoggaaminayo ayaa la filayaa inay maanta socdaal ku yimaadaan magaalada Hargeysa. Sidaas waxa Geeska Afrika u xaqiijiyay ilo xogogaala.
Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti, ayaa inkastoo aanu jirin war rasmi ah oo ku saabsan socdaalkiisa, haddana warar uu Geeska Afrika helay ayaa xaqiijiyay in socdaalkiisu la xidhiidho xadhiga DARE ee Internetka oo ay dawladda Djibouti leedahay 89% oo ay sheegtay inay soo marinayso Berbera, iyadoo ay xukuumadda Somaliland-na Geeska Afrika u xaqiijiyay inaanay Djibouti soo weydiisan wax ogolaansho ah oo la xidhiidha in xadhigan la keeno Berbera.
Wasiir Muumin, oo la filayo inuu Madaxweyne Geele ka soo qaaday farriin ku socota Madaxweyne Biixi ayaa la filayaa inuu Madaxweynaha Somaliland la yeesho kulan arrimahan ku saabsan, sidoo kalena wuxuu kulamo la yeelan doonaa dhiggiisa arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo masuuliyiin kale.
Warar kale ayaa iyaguna sheegay inay khamiistii Hargeysa soo gaadheen xubno ka tirsan dawladda Djibouti oo hordhac u ah weftigan wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaas, waxaana la filayaa in weftiga wasiirka daakhiliga Djibouti ku sugnaan doono Hargeysa maalmo dhawr ah.
Markabkii xadhiga DARE siday ayaa ka noqday biyaha Somaliland ee Saylac, ka dib markii ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland ka horistaageen inuu soo galo biyaha Somaliland maadaama oo aanu fasax ka haysan dawladda Somaliland.